Al-shabaab oo la wareegay deegaanka Moqokori ee Gobolka Hiiraan. – Hornafrik Media Network
Al-shabaab oo la wareegay deegaanka Moqokori ee Gobolka Hiiraan.
Hornafrik-Ururka Al-shabaab ayaa casir liiqii maanta dagaal culus kula wareegay degaanka Moqokori oo ka tirsan gobolka Hiiraan, kadib markii ay la dagaalameen ciidankii halkaasi ku sugnaa.
Ciidamada amaanka oo maanta rag hubeysan ku dilay Muqdisho.
Faah faahin dagaal ka dhacay Muqdisho.